Jubbaland oo sheegtay in la baarayo dhacdadii uu ku dhintay Cawil Buluq – AfmoNews
Jubbaland oo sheegtay in la baarayo dhacdadii uu ku dhintay Cawil Buluq
Maamulka Jubbaland ayaa war ka soo saaray dhacdadii caawa ka dhacday Magaalada Kismaayo, ee lagu dilay Maareeyihii hore ee Dekedda Kismaayo, Cawil Cali Barre (Cali Buluq), iyadoona shacabka reer Jubbaland uga tacsiyadeysay geerida ku timid.
Maareeyaha ayaa ku dhintay is rasaaseyn ka dhacday bar kontorool oo ku yaala afaafka hore ee gurigiisa, xaafadda Guulwade, gaar ahaan agagaarka Warshaddii Hilibka.
Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in marxuumka uu ahaa masuul ka tirsan Maamulka Jubbaland, isla-markaana uu u dhintay rasaas ka dhacday bar kontorool, oo hoygiisa ku dhow.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in laamaha ammaanka ee Magaalada Kismaayo ay gacanta ku hayaan baaritaanka, waxa keenay is rasaaseyntaasi.
“Marxuum Cawil Cali Barre oo ahaa masuul ka tirsan Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa u dhintay rasaas ka dhacday bar kontorool u dhow hoyga uu ka deganaa Magaalada Kismaayo. Hay’adaha amniga ee magaalada ayaa ku guda jira baarista waxa sababay rasaastaasi.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraalka laguma sheegin cid kale oo wax ku noqotay dhacdadaasi, sidoo kalena kuma cadda haddii gacanta lagu soo dhigay askartii falka gaysatay iyo haddii kalaba.
Dhinaca kale dadka degan xaafadda Guulwade ayaa ku sheegaya in dilka Maareeyihii hore ee Dekedda Kismaayo uu ahaa mid ay soo qorsheysay Madaxtooyada Jubbaland.
“Walaal is rasaaseynta waxay bilaabatay mar uu gurigiisa sii gelaayay Maareeyaha, intii ka horeysay wax is rasaaseyn ah meesha kama jirin, labada ciidan ee is rasaaseeyayna way wada jooggeen. Markii uu gaariga Maareeyaha meesha ka gudbay ayay is bareer ah rasaas ugu furayn.” Ayuu yiri goobjooge la hadlay Dhacdo.com.
Goobjoogaha oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa yiri “Cadayn kale ayaan rabaa inaan ku siiyo ciidamadii la sheegay inay is rasaaseynta dhex martay, hal askari ha noqdeen cid wax kaga noqotay malahan. Maamulkana ma qaadin tallaabo uu ciidamadaasi ku soo xir xiraayo, marka way iska cadahay in Madaxweynaha Jubbaland uu dilka amray, sababtuna ay tahay in Cawil Buluq uu ka carooday dilkii bishii October magaalada loogu gaystay Madaxii Amal Bank ee Gobolada Jubbooyinka, Cabdullaahi Cabdisalaan (Shigshigow), oo uu dilay askari ka tirsan Ciidamada Jubbaland. Axmed Madoobe iyo isagana muddooyinkanba khilaafkaas waa ka dhex jiray.”
Allaha u naxariistee Cawil Buqul oo ku heyb ahaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ahaa Saraakiishii beeshaasi ee la safan Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Wararkii ugu dambeeyay kiisaska COVID-19 ee dalka
Maxay ka wadahadleen Rooble & ganacsatada Soomaaliyeed? (SAWIRRO)
RW Rooble oo soo saaray awaamiir lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19
Puntland oo soo jeedisay in shirka lagu qabto Garoonka Aadan Cadde
Midowga Musharaxiinta oo iclaamiyay in 6-da bishan bannaanbax qabanayaan
Madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray geerida Xildhibaan Casoowe – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia